Kuedza LXDE | Linux Vakapindwa muropa
Ini ndinorangarira kuti nekukurumidza mushure mekuisa Debian Lenny, ini ndaida kuyedza iyo LXDE nharaunda yaive ichangobatanidzwa muDebian. Ndakanga ndisingazive kuti chaive chii, kungoti yaive isina kuremara desktop nharaunda uye sezvo ini ndichifarira kucheka, ndakazviedza.
Chii chinonzi LXDE?
LXDE iri nyore desktop nharaunda, iyo inowanzo shandisa Openbox semaneja wewindows, sekungoshandisa GNOME Metacity Ngatitii LXDE ndiwo makwikwi emwenje eKDE, GNOME kana XFCE (XFCE kunyanya).
Ini ndaifunga kuti yakaiswa nekusasarudzika pasisitimu, asi yakanga isiri, ndaifanira kuiisa kubva kumatura, zvisinei, kurodha pasi nekuriisa harisi dambudziko, mapakeji ese asina kubviswa anorema 26 megabytes zvakanyanya.
LXDE ine chimiro chakareruka, ine mashoma mapurogiramu ayo, asi mazhinji ezvirongwa zvandinoshandisa hazvisi zveGNOME saka ndakanga ndisina matambudziko makuru, gare gare ndichaenda mune ruzivo nezvekuti ndeapi mapurogiramu ekushandisa.
Ini ndinoda kuchekerera neLinux nguva nenguva, kamwechete kwechinguva ndakaedza Fluxbox, maneja wewindows ndiye anotungamira Openbox, neyekupedzisira ndakashamisika zvakanyanya, nekuti kunyangwe naFluxbox ndainzwanana chaizvo, kutaura chokwadi ihurongwa husingashandisike uye hunouya nekutadza hwakashata kana iwe ukahuisa kekutanga pamwe nezvirongwa zvaro izvo zvisingabatsire zvakanyanya. Openbox rinoteera mutsetse waro wekureruka asi unonyanya kushandiswa, asi zvimwe, kutanga nawo hauuye "mbishi" seFluxbox (avo vakashandisa Fluxbox vanonzwisisa kuti sei ndichiti inouya "mbishi"), inouya yakagadzirira kushandisa uye ichiri kugadzirisika.
Nei uchishandisa LXDE?
Izvo zvinobvumidzwa neLXDE ndeye kushandisa yakanaka uye inooneka inofadza hwindo nharaunda, yakafanana chaizvo ne KDE kana GNOME paPC ine mashoma zviwanikwa kana kuunza distro pane pendrive kuchengetedza yakawanda nzvimbo (muchokwadi LXDE inopa Rarama vhezheni yeDebian yeCD uye imwe kunyanya yeUSB inorema pasi pe500 MB).
Mune yangu kesi, LXDE yakandibvumidza kushandisa PC yangu zvakadzikama, tembiricha inochengeterwa padiki kuishandisa, haina kunetseka, haina kuita kuti ive isina kugadziriswa nyore nyore uye, kunyangwe iine mashoma zvirongwa, asi zvakajairika zvirongwa yekushandisa zuva nezuva basa pasina matambudziko. Inotendeuka nekubatidza nekukurumidza.
Nokusingaperi, zvirinani muDebian kunyangwe zvichiratidzika kwandiri kunge zvinogara zvakafanana, shandisa zvirongwa izvi zvakanyanya kukosha:
PC Man File Manager: Yakakodzera Nautilus kutsiva, iri nani PCMan kupfuura Thunar, zvinoita kuti ndinzwe sekunge ndiri kunyatso kushandisa iyo browser browser uye kwete kadhibhodhi system. (MuFluxbox ini ndainzwa kunge ndanga ndichishandisa kadhibhodhi nharaunda inogona kunditakudza mumasekondi maviri kana ndikasangwarira.)
Leafpad: Ndiyo mhariri yemavara, yakapusa, zvekuti ndinosuwa kuburitsa, ngatitii i "Windows Notepad" chaiyo asi paLinux. Basa rayo nderekuti pane zvirinani chinhu chekuverenga zvinyorwa zvemafaira uye kuti "chimwe chinhu" chakareruka.
LXTerminal: Chii chinonzi LXDE terminal yakareruka pane mamwe uye ini ndinoishandisa pane mamwe.
GPicView: Icho muoni wemufananidzo, zvakangofanana zvakafanana nevamwe muGNOME kana Windows XP.
Inozadzisa basa rayo.
Sezvauri kuona, zvirongwa zveLXDE zviri nyore, zvinowirirana kunyangwe zvisiri chinhu chikuru.
Zvandinoreva neizvi ndezvekuti iwe unogona kuita zvakaringana zvakafanana chinhu seGNOME pasina GNOME uye inoshanda chaizvo.
Kutaura nezve chaiwo mapurogiramu, iyo GNOME "Screenshot" haishande kwandiri, asi ini ndinogadzirira izvo ne scrot (chirongwa chine zita rakashata asi chinobatsira kwazvo).
Uchishandisa LXDE inofanirwa kunge iri yekuchengetedza zviwanikwa, saka zvangu zvinokurudzirwa kunyorera ndeizvi:
Kana iwe uchida kusevha zviwanikwa zvaunogona kushandisa Epiphany kana Kazehakase pachinzvimbo cheFirefox (kunyangwe ini ndichishandisa Iceweasel pasina matambudziko)
Pidgin pane zvese zvine chekuita nekutaura nevanhu.
Zve Twitter ... Pidgin zvakare neayo plugin mbpidgin.
Zvinyorwa? Kana zviri zvekugadzirisa mazwi usasarudze OpenOffice, sarudza Abiword.
Kuverenga tsamba nenzira yechinyakare ini ndichiri kushandisa Evolution. Ndinogamuchira mazano.
Zvimwe zvacho zvakada kufanana kana ukanzwa kuda kushandisa zvekare zvirongwa zveGNOME zvinoitawo.
Musoro unokodzera chinyorwa chitsva, asi ngatitii zvinokwanisika kuushandisa, ndatsvaga ruzivo uye rwunoona kuti zvinokwanisika kurushandisa nenzira iyi, kunze kwekunge iyo system inogona kumhanya zvishoma (I fungidzira kuti pavanotaura nezve kunonoka, ivo vanoreva zvigadzirwa zvekare zvinosanganisira ino nharaunda).
Ini handizive kuti inoitwa sei, pamwe inotanga otomatiki, kana mumwe munhu atozviita, inguva yekutaura.
Mhedziso yangu nezve LXDE
Iyi nharaunda yakandibatsira kudzora tembiricha, saka ndinonamira nayo, ndichivawo hurongwa hunondibvumidza kuvhura iwo mamwe mapurogiramu sepakutanga uye nerunyararo rwakafanana kana rukuru.
Ndinoisa sei LXDE pane yangu distro?
Muna Debian Lenny zvakaringana kuisa pasuru "LXDE" kuitira kuti zvese zviiswe uye titange nazvo.
De Ubuntu Ndine ruzivo rwekuti muIntrepid Ibex 8.10 maitiro acho ari nyore senge munaDebian Lenny, asi kana iwe ukaverenga naHardy iwe uchafanirwa kuwedzera dura yakakosha kuUbuntu hwako:
Zvimwe chetezvo naGutsy achichinja "hardy" kuita "gutsy" mune imwecheteyo kodhi senge pamusoro.
Mirayiridzo pano yekuisa LXDE paFedora
Iwe hauna kuisa distro yangu
Ruzivo rwuri paLXDE wiki
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Kuedza LXDE
Amm, ndinofunga iwe wakavhiringidzika. Kutanga, openboz haisi mutsivi we fluxbox, asi ihama.
Ose maviri anobva ku blackbox, imwe wm. Asi, kutaura zvazviri, haichabatanidzi kodhi yayo, saka ivo havasisina chekuita nayo.
Zvakare, fluxbox haina kushandiswa, HAUZIVI mashandisiro ayo, chinhu chakasiyana zvakanyanya;).
Mune yakanaka vibes, ndinofunga iwe unofanirwa kuongorora zvishoma zvishoma, nekuti unoratidzika kunge wakavhiringidzika.
Zvisinei, ini ndiri anotevera anofarira ako blog, uye iyo vdd ini
Ngatione, ini ndichakupa chikamu chekutanga muchidimbu, nekuti ini handizive iwo nhoroondo yenhoroondo yevatema mabhokisi zvigadzirwa, zvakanaka.
... yatova fanboyism.
Muchokwadi, kuongorora chirevo chako, chimwe chinhu chinondibata ... icho chirevo che usability, muWikipedia ndeyekuti chero munhu averenge: http://es.wikipedia.org/wiki/Usabilidad
Chii chandingataure nezveFluxbox? Chinhu chimwe chete chandakadzidza uye nezvavanondiudza pandakazviisa, kuti zvinovaraidza, zvinogona kunge zvakanaka, asi kuti zvinotora basa rakawanda (kana rimwe) uye kuti zvishoma kusimba.
Ndinoyeuka kuti ndanga ndichitamba nayo uye rimwe zuva ndakarasa bhatani reruboshwe kana kurudyi mbeva, handicharangariri zvakanaka, kuyedza kugadzirisa chimwe chinhu. Zvakare kuti iwo mapaneru aive akagadziridzwa zvishoma, hwindo raigona kuzadzikwa pasi pepaneru kana raive rakakwidziridzwa (ini handizive kana izvo zvave nani nekufamba kwenguva).
Iko kushandiswa kunofanira kuita, kurerutsa izwi, nekureruka kwekushandisa asiwo nezinga reruzhinji kwarinoendeswa.
Ini ndinoshandisa Debian nhasi asi Debian hapana mubvunzo isingashandisike kupfuura Ubuntu neLinux Mint ingangodaro ichishandiswa kune newbie kupfuura iye, asi isingashande kune mumwe munhu ane zvido zvakaoma.
Ndine urombo kana nenyaya ino ndakagumbura mumwe munhu anoda Fluxbox.
Ndamuziva kubva muna Nyamavhuvhu 2008 uye ndinomuda chaizvo. Nezve compiz fusion, unofanirwa kunge uine chakakanganisika mu xorg.conf yako kana madhiraivha ako haana kuiswa nenzira kwayo nekuti ini ndinogona kuishandisa pasina dambudziko, kana kunonoka kana chero chinhu uye ini handina kuita chero chakakosha kuti chindishandire.
Nezvaunotaura nezve fluxbox ini handizive kana kuseka kana kuchema :(
nenzira ArchLinux Rulz !!!
@Edgar asi ndapota verenga zvinyorwa zvakanaka, handina kuti ndainonoka, ndakati panzvimbo chete pandinoverenga nezvazvo (hapana kana vhidhiyo yeYouTube yeLXDE ine Compiz Fusion) yakaratidza kuti inogona kuenda anononoka.
Handina kumbozviedza! Ndinovimba kuzvibata nekukurumidza, kana ndawana nguva uye kugadzirisa iyo nvidia mutyairi zvakare yandisina kuisa
Masosi, iyo nhema chikamu cheiyo Wallpaper ndeyekuti iwe ugone kuisa iwo ma icon !!, haha
@esty Ndezvekuti ini handikwane, pandino gadzira mutyairi weNvidia (ndine husimbe kwazvo) ndinogona kuvachenesa, iniwo ndiri kutadza.
Kunyanya ini handidi LXDE, tora Debian Live mune yako Shanduro yeLXDE uye ndakazviedza pavhiki.
Pamwe ndinotadza kubva fanboyism asi ini ndinoda yangu yakapusa uye inoshandisika fluxbox uye kana kuenzanisa kwangu kuri kukanganisa mumwe munhu andiudze:
PCMan File Manager -> ls
GPicView -> kuratidza kana eog
kuchengetedza zviwanikwa :)
Epiphany -> w3m-img
Pidgin -> centerim
Zvakanaka chaizvo izvi zvekupedzisira zviviri handichazvishandisa zvakare: p
Ini ndakaisa debian lenny neiyo iso umo xfce uye lxde vanoenda
Uye chete hurema hwandakawana ndewekuti iwe unofanirwa kuisa nemaoko mamwe mapurogiramu anosanganisira synaptic, nekuti nekutadza inongounza openoffice, icewacel, gimp uye zvirongwa zvawakambotaura,
Maziso aEsty anotobuda kunze paanoona zvakaitwa nevapoteri ne * yake * Wallpaper xD ...
Ini ndakaisa lxde apo ini nguva pfupi yapfuura pandakaita iyo Lenny kuisirwa, asi ini handina kuyedza Izvozvi ndinopfeka izvo.
LXDE iri nani iri nani pane XFCE pachokwadi, zvirinani zvinoita senge (isu tichafanirwa kumirira vhezheni 4.6), kana iri Fluxbox inopenya mwenje uye inoshandisika (ndinoifarira)
uye nechimwe chikonzero pese pandinoverenga LXDE ini ndinobva ndazvibatanidza neLXA!, zvichave zvakafanana pakati pemazita :)
@jocho Tiri kunyatso tumidza zita LXDE iyo yepamutemo LXA desktop nharaunda!
Ndakaishandisa kwechinguva chidiki. Moyo wangu uchiri wechekare kde. Asi hei, mumwe anowanzoedza zvese. Uye kwete kare kare ndakatanga kutamba ne openbox. Mukugovera kwakanaka kwazvo uye kwakareruka. Chii chinonzi crunchbang linux. Kutonhora. Ipapo ndakafanirwa kuyedza chimwe chinhu chandakanga ndaona nekuda kweiyo gos. Chii chinonzi kuvhenekerwa. Magumo anopenga. Inofanirwa kumisikidza nekutamba sezvaingade. Zvakanakisa. izvozvi ndiri kutandara nazvo.
Eee, ini ndinofunga ndine chikwereti newe kukumbira ruregerero: $.
Zvakareruka, ini ndaida chaizvo zvawakanongedzera, kuti kushandiswa kunoenderana zvakanyanya nekuti ndiani anoishandisa n_n.
Zvakare, ini ndinokutsigira iwe mune iyo fluxbox inoita kunge yakashata kwandiri, pachezvangu ini ndinoda openbox.
Uye ndinokumbira ruregerero zvakare kana ndikakugumbura, icho chaisave icho chinangwa changu.
@Olovram Kwave kuri kupisa kwangu panguva ino, hazvina basa, hapana chekureverera.
munhu wese anofara: D
Mupiro wakanaka kwazvo, asi ini ndoda kugadzirisa chimwe chinhu maererano nekumisikidzwa muGusty: Nekuchinja "Hardy" ye "gusty" Hazvishande. Wedzera izvo zvekuchengetedza (sezvazviri mupositi) zvinoshanda! :)
PS: Ndanga ndichishandisa Fluxbox kwegore izvozvi uye hapana IceWm kana Gnome kana Kde kuibvisa pachigaro izvozvi! (Ngatione zviri kumusoro!)
Hei, usandirege nditaure nekuti ndiri kuyedza kusiya zvimwe zvinongedzo ...
Nyatsoona kana ndikakwanisa kusiya zvinongedzo:
Chicossss wakateedzera kubva kwandiri ??? hahahaha (kungoseka) ndezvekuti musi wa22 ini ndaisa chinongedzo kunewewe debian rarama neLXDE uye pane makumi maviri nematatu masosi anoisa iyi hahaha
Izvo hazvindibvumidze ini kuti ndiise zvimwe zvinongedzo kune mupenyu Debian neLXDE iyo yandakawana: S
@ laura077 Kwete, ini handina kukuverengera, zvisingaite asi ichokwadi: P
Kune vamwe vese, ini ndatove "ndakaburitsa" yako chirevo.
Iwe unofanirwa kuziva kuti makomendi haabvumire anopfuura maviri ma link pasina kuenda kune zvine mwero, asi kana iwe uchida kuzviita, usazvicheka iwe, zviite zvakadaro uye ini, ndinogara ndichiongorora zvataurwa, ndichazviziva uye nekuzvisunungura nekukurumidza .
(Ndinovenga maWikiPress emoticons, iwo akashata, ndiri kuzochinja iwo)
hahaha (Ndinovenga maWikiPress emoticons, akashata, ndiri kuzochinja iwo)
ndatove, uye ini ndinovenga ma default templates eshoko remazwi, blogger, nezvimwewo ...
Ok, ini ndanga ndisingazive zvaiitika zvine mwero ndatenda, ikozvino ndinoziva :) :) (mamwe maemaikoni)
Kumhanyisa isingaremi email mutengi ini ndinoshandisa Sylpheed. Iyo yakavakirwa pamaraibhurari eGTK uye inoshandisa chete 8mb yegondohwe !!
Ndakaifarira zvakanyanya zvekuti ndakadzinga iyo Thunderbird: P
Pindura kune Grapefruit
Fernando Zetas! akadaro
Debian + LXDE yakanaka, inokurumidza, kunyangwe ini ndisingazive, ndinonzwa kumhanya ... zvakafanana, kana padhuze nezvandaive nazvo naXubuntu (ubuntu + xfce) asi chikuru chandikanganisa ndechekuti keyboard yangu yakaenda kuUS. uye ini handikwanise kunyora iyo kana iyo @, kana iwe ukakwanisa kundiudza maitiro ekugadzirisa izvo! Ini ndinovhura iyo koni uye ndonyora mimwe mirairo uye inoenda kuSpanish kusvikira ndatanga uye inodzokera kuUS.
Pindura Fernando Zeta!
Muise muLXDE autostart
uye nyaya yagadziriswa.
Verenga izvi zvinogona kukubatsira kuti uzvinzwisise:
Ndine xubuntu ine lxde uye compiz
Ndinovimba unoona foto ...
nenzira yandisingakwanise kuwana maitiro ekushandura desktop kumashure .. Ndinoyeuka kuti yaive yakapusa, mwedzi mishoma yapfuura handina kushandisa makina!
nezve !! Ini ndakaburitsa iyo debian + lxde distro, inoshanda chaizvo pa 700mhz pentiumIII ine 448mb yegondohwe muhupenyu mode, mubvunzo wangu ndewekuti kana ndikaiisa pane rakaomarara diski, ndingaisa sei iyo synaptic yekuisa mamwe mapurogiramu pairi uye sei ndinoishandura kuita Spanish? Mumwe munhu anogona kundibatsira ndapota, ndatenda.
Ini ndakaisa iyo nvidia mutyairi uye iyo keyboard ikave yeChirungu, nekuda kwezano rako ini ndakakwanisa kugadzirisa dambudziko.
Hi dhawunirodha debian-live-503-i386-lxde-desktop.iso
asi ini handizive kuti ndinoiisa sei, haina iyo yekuisa ini yandinofunga.
Iwe unoziva, ini ndiri mutsva ku linux uye ndanga ndichifananidza pakati pegnome onubuntu uye kde pane mandriva kwenguva yakareba, ini zvirokwazvo ndakasarudza mandriva chiuru.
Nekufamba kwenguva, ndakaedza kudzidza zvakawanda nezvezvinyaradzo uye mamwe mapurogiramu andakaodzwa mwoyo nezvandaive nazvo ... kudzamara ndasvika pakuita dhiri. vaindiodza mwoyo. mukupedzisira ndakatanga hupenyu hwangu zvekare ne lxde mune dhiian uye ini ndakanyatsogadzikana uye ndakanyanya kugutsikana.
uyezve ini ndine debian, ndanga ndichikanganwa mandriva uye kudhizaina seinoshoreka kunyangwe zvakanyanya kuma windows